Horudhac: Chelsea vs Newcastle United… (Kooxda macallin Steve Bruce oo doonaysa inay Blues mariso wadadii Man United) – Gool FM
(London) 19 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa soo dhoweynaysa naadiga Newcastle United kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Newcastle ayaa rajaynaysa inay guul layaab leh soo hesho marka ay u safarto garoonka Stamford Bridge, halkaasoo ay galabta kula soo ciyaari doono naadiga Chelsea kulan ka tirsan horyaalka English Premier League.
Kooxda uu hoggaamiyo macallin Steve Bruce ayaa guul cajiib ah oo 1-0 ah ka gaartay Manchester United ka hor inta aan la aadin ciyaaraha qarammada ee heerka caalami, iyagoo horayna uga soo carreysiiyey Tottenhan oo ay kula soo ciyareen Magaalada London markaasoo ay uga soo adkaadeen 1-0, waxaana ay doonayaan inay maanta Chelsea mariyaan wadadii ay ku direen Man United.
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 5:00 Galabnnimo xilliga geeska Afrika.
Laacibka khadka dhexe ee Chelsea, N’Golo Kante ayaa ka maqnaan doona kulankan, kaddib markii uu dhaawac gumaarka ah ku soo gaaray waajibaadka xulkiisa qaranka.
Daafacyada Andreas Christensen iyo Antonio Rudiger ayaa ka maqnaan doona Blues, laakiin Mateo Kovacic ayaa dib uga soo laabtay dhaawac bowdada ah oo uu la maqnaa.
Dhinaca kale Newcastle ayaan qabin wax walwal ah oo dhaawacyo cusub ah, waxaana la filayaa inay aamini doonto oo ay aaminka ku qabi doonto isla safkii garaacday kooxda Manchester United.
Isaac Hayden ayaa weli ganaaxan, halka ciyaaryahanka khadka dhexe ee Matt Ritchie uu isna dhaawac canqawga ah kaga maqnaanayo Newcastle kulankan.
>- Chelsea ayaa guul gaartay lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League kula ciyaartay garoonkeeda naadiga Newcastle, waxaana ay ka dhaliyeen mudadaas 17 gool, iyadoo laga dhaliyey kaliya saddex gool.
>- Chelsea ayaa 13 gool oo horyaalka Premier League ay dhalisay xilli ciyaareedkan waxa ay ka heshay xiddigo Ingiriis ah, waana in ka badan koox kasta oo kale.
>- Newcastle ayaa indhaha ku haysa inay gaarto labo guul oo xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii April.
>- Macallinka Newcastle ee Steve Bruce ayaa guuleystay kaliya hal jeer 21 kulan oo horyaalka Premier League uu ka hortagay Chelsea, waxaana uu ka haystaa 5 barbaro iyo 15 guuldarro, halka guul oo uu ka helayna waxa ay timid kulan ka dhacay garoonka Stamford Bridge bishii November sanadkii 2010-kii, markaasoo isagoo watay kooxda Sunderland uu uga badiyey 3-0.
Horudhac: Crystal Palace vs Manchester City... (Kooxda Sky Blue oo doonaysa inay ka soo kabato guuldarradii ka soo gaartay Wolves)